Wilson ကတိတ်ဆိတ်ဖို့ Prause ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု; သူမ၏တားမြစ်မိန့်ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်သူမသည် SLAPP ၏စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုတွင်ရှေ့နေစရိတ်များ - Your Brain On Porn
ငါဘယ်လို၏ပစ်မှတ်ဖြစ်လာခဲ့တာလဲ နီကိုးလ် Prause? တရားဝင် YBOP သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏အောက်တွင်ကျွန်ုပ်၏တရားဝင်အောင်ပွဲနှင့် Prause ၏နားလည်မှုစာဖတ်သူများအားကူညီရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တင်ပြသည် ၇ နှစ်သက်တမ်းရှိအကြမ်းဖက်မှု အဲဒါကို ဦး ဆောင်ခဲ့တယ် လုယူသူသတိပေးချက်သူမဟာဒီအရာအားလုံးကိုသူမအပေါ်ယူခဲ့တယ်။
အသံ porn သုတေသီရဲ့တားမြစ်မိန့်ကိုလိုက်အောင်အဖြစ်ငြင်းပယ်; ရှေ့နေစရိတ်များကို SLAPP ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပေးရပါမည်။
Ashland, Oregon - ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက်။ အရောင်းရဆုံးအရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူ Gary Wilson သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်နှင့်လိင်စိတ်ပညာလေ့လာသူ Nicole Prause အားအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးမှ Prause သည် Wilson အားတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အများပြည်သူပါ ၀ င်မှုကိုဆန့်ကျင်။ တရားမဝင်သော“ မဟာဗျူဟာတရားစွဲဆိုမှု” (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ဟုစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိရန်အမိန့်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်က Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
အဓိကဆောင်းပါး - Prause ၏တားမြစ်မိန့်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်သော SLAPP ဝတ်စုံနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ငါစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးကို Prause ၏ဆိုးရွားသောလုပ်ရပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နိုင်သည်ဟုပြောသောအခါကျွန်ုပ်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Prause ရေခဲစိုင်၏အစွန်အဖျားသာရှိသော်လည်း၊စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5Word) စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုထဲသို့ကူးယူပြီးကူးထည့်သောအခါစာမျက်နှာ ၂၀၀၀ ကျော်ဖြည့်ပါ။ ပြောရလောက်အောင်လုံလောက်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်ဆိုင်ရာပေါ်လွင်ချက်အချို့ကိုသာတို့ထိနိုင်သည်။ လုံလောက်ရုံမျှနှင့်စာဖတ်သူသည် YBOP ကိုဖြုတ်ချရန် Prause သည်ဘာကြောင့်ဤမျှငရဲသို့ရောက်ရခြင်း၏အဓိကအကြောင်းရင်းကိုနားလည်နိုင်ရန်စာဖတ်သူနားလည်နိုင်သည်။
David Ley နှင့်သူမမတ်လ ၂၀၁၃ ထုတ်ဝေသည့်အချိန်အထိ Prause အကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် ငါနှင့်ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက် (YBOP) ကိုပစ်မှတ်ထားသောဘလော့ဂ်ပို့စ်
မတ်လ ၆ ရက်၊ ၂၀၁၃ မတိုင်မီကနီကိုးလ် Prause အကြောင်းကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမကြားဖူးပါ။ ထိုကံဆိုးသောနေ့တွင်၊ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့် နီကိုးလ် Prause တစ်ဦးရေးသားဖို့တက်ပူးပေါင်း စိတ်ပညာယနေ့တွင် ငါနဲ့ငါ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်Porn on Brain - ဒါကစွဲလမ်းစရာမရှိဘူး။ ” ၎င်းနှင့်ဘာမှမဆိုင်သောကြောင့်၎င်းခေါင်းစဉ်သည်အထင်လွဲစရာဖြစ်သည် Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက် ဒါမှမဟုတ် neuroscience ဤနေရာတွင်တင်ပြခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, Ley / Prause ဘလော့ဂ်သည်ထိုစဉ်က Prause ၏လှည့်စားမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် အတည်မပြုရသေးသော EEG လေ့လာမှု - သံမဏိ et al။ , 2013။ Ley ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်သည်ထင်ရှား5လအတွင်း ရှေ့မှာ Prause ရဲ့ EEG လေ့လာမှုတရားဝင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ Ley & Prause ၏ဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုတားမြစ်ရန်ထောက်ခံကြောင်းထောက်ခံခဲ့သည်။
Prause ရဲ့ PR စနစ်ကိုအသေအချာစီစဉ်သည် ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းမီဒီယာများကလိင်စွဲလမ်းမှုပြိုကွဲသွားပြီဟုသတင်းခေါင်းစဉ်များအားလုံးနှင့်သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါတိုတောင်းသောတင်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင် David Ley post ၏ပါ ၀ င်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမေးခြင်း (မူလဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုမော်ကွန်းတင်ထားသည်။ ) ဒီမှာ).
ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏စကားလုံးတစ်လုံးတည်းကိုမချေပနိုင်သေးပါ စိတ်ပညာယနေ့တွင် post ကို, ဒါမှမဟုတ် ငါဇူလိုင်လအတွင်းရေးသားခဲ့သည်ဝေဖန်မှု သူမ၏ EEG လေ့လာမှုပြီးနောက်နောက်ဆုံးတော့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မဟုတ် Prause ၏တစ်ခုတည်းသောစကားလုံးချေပခဲ့သည် ၏ 8 သက်တူရွယ်တူ - ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှုများ သံမဏိ et al ။ Ley / Prause ဘလော့ဂ်ကိုစိတ် ၀ င်စားမှုအဖြစ်ဖော်ပြပြီး Prause ၏ EEG ရလဒ်များသည်စွဲလမ်းမှုပုံစံနှင့်တူညီသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် Prause သည် petulant နှင့်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသူမအားနောက်ယောင်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်
Aprilပြီလ ၁၀ ရက်တွင် Prause သည်သူမနှင့်သာအဆက်အသွယ်ပြုခဲ့သည်2အီးမေးလ်များနှင့်ငါ့အောက်မှာမှတ်ချက်၌တည်၏ စိတ်ပညာယနေ့တွင် တုံ့ပြန်ချက်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းသူမဆက်သွယ်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် သူမ၏ဒုတိယအီးမေးလ်ကိုပို့သူကိုအယ်ဒီတာများ။ အောက်ပါအီးမေးလ် ၂ ခုမှ ပြီးပါပြီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျဉ်းလဲလှယ်၏ (Prause & Wilson ၏အီးမေးလ်ဖလှယ်မှုတစ်ခုလုံး၏ PDF):
သင်မြင်သည့်အတိုင်းငါ Prause သည်ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုသူမအားနောက်ယောင်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲသည် တုံ့ပြန် သူမငါ့လမ်းကိုစလှေတျအီးမေးလ်နှစ်စောင်မှ။ ဒါက Prause ရဲ့လုပ်ကြံဖန်တီးမှုအတွက်အစပဲ။ အဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှ "နောက်ယောင်" တောင်းဆိုမှုများ.
သုံးလအကြာမှာငါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးနောက် ငါ့ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။ , 2013, ချီးမွမ်းသူမ၏စတင်ခဲ့သည် အများပြည်သူ "ဂယ်ရီ Wilson ကအပြေးသမားဖြစ်ပါတယ်" ။ YouTube channel နှစ်ခုအပါအ ၀ င်၊ GaryWilson Stalker နှင့် GaryWilson IsAFraud။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ YouTube စာဝင်ပုံး၏မျက်နှာပြင်တွင် Prause ၏စွဲလမ်းမှုဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုကိုဖော်ပြသည် -
အောက်တွင်ဥပမာတစ်ခုသာဖော်ပြထားသည် ဤကာလအတွင်း posted များစွာ။ ထုံးစံအတိုင်း Prause ၏ aliases များသည်ဂယ်ရီ Wilson အား“ သိပ္ပံပညာရှင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အားရောင်းစားခြင်း” ဟုစွပ်စွဲသည်။
သူမမှားယွင်းတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုတစ်ယောက်တည်းဂုဏ်မတင်ခဲ့ဘူး။ လာမယ့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခံခဲ့ရပါတယ် မြောက်မြားစွာတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ လိင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ သေခြင်းကိုဖြစ်စေ၊
ဤနည်းအားဖြင့်, Prause ဂရုတစိုက်ထွင်းထု သူမ၏သားကောင်များ၏ဒဏ္ာရီသူမသည်ကျူးလွန်သူဖြစ်သော်လည်းအခြားသူများ၏ဘဝကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားသည်။ Prause ရှိနေစဉ် အဲလက်စ် Rhodes ရှုတ်ချ နှင့် Don Hilton တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်သူမအားလိင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်လိင်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်သည်ဟူသောမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များအပေါ်စွဲမှတ်ခဲ့သည်။ Prause အားဖက်ဒရယ်အသရေဖျက်မှု ၂ ခုနှင့်နောက် Donald ဟီလ်တန်, MD နှင့် Nofap တည်ထောင်သူဖြစ်သည် အလက်ဇန်းဒါး Rhodes.
Prause ၏အသရေဖျက်မှုနှင့် cyberstalking များ၏ပြင်းထန်မှုသည်အဆတိုးများပြားလာပြီး၊
UCLA Prause တွင်သူမတို့အချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်ကိုနှောင့်ယှက်ရန်နှင့်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရန်အတွက်အတုအယောင်နာမည်များစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည် porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ, Quora, ဝီကီပီးဒီးယား, ထိုအတွက် မှတ်ချက်အပိုင်း ဆောင်းပါးများအောက်မှာ။ ချီးမွမ်း ခဲသူမ၏အမည်ရင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည် သို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များ (သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်) ။ UCLA သည် Prause ၏စာချုပ်ကိုသက်တမ်းတိုးရန်မရွေးချယ်ပြီးနောက် (အားလုံးသူမသည် ၂၀၁၅ ဇန်န ၀ ါရီလတွင်သူ၏စားပွဲခုံကိုထုပ်ပိုးထားပုံရသည်) ပြီးနောက်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။
မည်သည့်ကြီးကြပ်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးယခုတွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်းမှ Prause သည်မီဒီယာမန်နေဂျာနှစ် ဦး မှထပ်တိုးခဲ့သည် မီဒီယာ2×3သူမ၏ကုမ္ပဏီ၏ "တည်ငြိမ်သော" ၏သေးငယ်သောတည်ငြိမ်မှ (။မီဒီယာ2×3သမတ Jesse Ponce ကဖော်ပြသည် သူသည်ဟောလိဝုဒ်မီဒီယာနည်းပြနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်.) သူတို့အလုပ်သူတို့ ရန်ဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်ဆောင်းပါးများ စာနယ်ဇင်းအတွက် Prause featuring, သူ့ကိုရှာဖွေ စကားပြောတွေ့ဆုံမှု လိုလားတဲ့ porn နှင့် ခေတ်ရေစီးကြောင်းနေရာများ။ တစ်ပါမယ်ဘက်မလိုက်သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်ထူးဆန်းနည်းဗျူဟာ။
ဥပမာများတွင် Prause's (1) FSC၊ A အတွက်တိုက်ရိုက်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတိုက်ရိုက်အထောက်အပံ့ VN, XBIZ, xHamster နှင့် PornHub, (2) လက်ခံ ထံမှ "အကူအညီ" အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း (နှင့် Prop 60 ကိုချက်ချင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း)(3) အခမဲ့ခွန်းညွန့်ပေါင်း စွပ်စွဲတဲ့ Prause လေ့လာမှုအတွက်ဘာသာရပ်များပေး သူမအနေဖြင့်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်စွဲခြင်းကို“ ဖျက်သိမ်း” မည်ဖြစ်ပြီး (၄) ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဆု (XRCO, AVN မှပံ့ပိုးသောဖြစ်ရပ်များ) ကိုတက်ရောက်ခြင်း.
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်သူမသည်ရဲရင့်သောလှုပ်ရှားမှုအတွက်ထိုအချက်ဆီသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ Prause သည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်“ PornHelps” ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ (၏ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ဒီ tweet နှင့်တစ် ဦး စိတ်ပညာယနေ့တွင် မှတ်ချက် Prause ကို“ PornHelps” အဖြစ်ဖော်ပြခြင်း၊ @pornhelps Twitter နှင့် PornHelps ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်သဲလွန်စမရှိဘဲပျောက်ကွယ်သွားသည်။ )
တစ်ဦးအဖြစ် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏ Darling, Prause သည်သူမ၏အမည်ကိုမှားယွင်းသောအယူအဆများဖြင့်စတင်ဖော်ပြခြင်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ထိုအချိန်ကကျွန်ုပ်သည် Prause ၏ရာနှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာမှတ်ချက်များနှင့်နောက်ကွယ်မှနောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများ၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ခဏတာအတွင်းသူမသည်သုတေသီများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း၊ ယူကေပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ).
သူမ၏နိုးနာရီဖြုန်းနေစဉ် နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းနှင့်အတူ, Prause လိမ္မာပါးနပ်ဆက်လက်စိုက်ပျိုး - အတူ သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သူမကခဲ့ကြောင်းဒဏ္myာရီ “ သားကောင်” ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်လက်ရှိသုတေသနပြုမှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုရင်ဆိုင်ရန် Prause ၏တွစ်တာများ၊ ပို့စ်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုနောက်စာမျက်နှာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ကျွန်ုပ်ဖိအားပေးခံရသည်။ သူမသည်သူမ၏သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။ (နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်ထပ်မံအပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အခြားသူများကမူကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မှမသိရှိနိုင်တော့ပါ။ )
အမှန်တရားကိုဖော်ပြသောဤစာမျက်နှာများသည်သူမသည်ဂရုတစိုက်ကောက်ယူထားသောလူထုပုံရိပ်ကိုရဲရဲရင့်ရင့်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ မုဒိမ်းကျင့်ခြင်းနှင့်ယခုအခါသေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?
Prause ကသူမရဲ့ဆိုးရွားလှတဲ့အပြုအမူသက်သေအထောက်အထားတွေကိုမြှုပ်နှံနိုင်ရန်အတွက်အထက်ပါစာမျက်နှာများကိုဖယ်ရှားရန် (သို့မဟုတ် YBOP ကိုပိတ်ထားရန်) ဆုံးဖြတ်ရန်နည်းလမ်းများစွာကိုစူးစမ်းခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, 2018 ခုနှစ်, Prause YBOP ၏ webhost တွင်အတုအယောင် ၃ ခုနှင့်မအောင်မြင်သော DMCA ဖြိုခွဲမှုများကိုတင်သွင်းခဲ့သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုဖယ်ရှားရန်ကြိုးစားခြင်း DMCA စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအသိပေးချက်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှမူပိုင်ခွင့်ထားသောပစ္စည်းများဖယ်ရှားရန်အသုံးပြုသည်။ Prause သည်သူမအားနှောင့်ယှက်မှုနှင့်အသရေဖျက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောစာမျက်နှာများကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်မီးလောင်စေရန်အတွက် DMCA မှဖယ်ရှားခြင်းကိုနောက်ခံလမ်းတစ်ခုအဖြစ်တင်သွင်းခဲ့သည်။ တွစ်တာများသည်မူပိုင်ခွင့်မရသည့်အတွက်ကြိုးစားမှု ၃ ခုလုံးကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
အခါ အခြေအမြစ်မရှိ DMCAs ပျက်ကွက်, Prause ကဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် YBOP ကိုပိတ်ပစ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာ ငါ့ရရှိရန် URL (yourbrainonporn.com) နှင့် ကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်)။ URL ကိုထိန်းချုပ်ပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်ဆိုဒ်တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည်။ Prause ၏ USPTO အက်ပလီကေးရှင်းကိုပြသပုံ (ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၁၉)
Prause ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သူမအတွက်စျေးကြီးသောဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစေခဲ့သည်။၈- မျက်နှာပါသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်နီကိုးလ် Prause ကို ၂၀၁၁ မေလ ၁ ရက်၊) ။ ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်အမှုဖွင့်ရန်အချိန်တန်မှသာပြုလုပ်ခဲ့သည် သူမသည်သူမ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာကို drop (အောက်တိုဘာ, 2019) ။
2019 ၏ဧပြီလအတွက်, Prause နှင့် Daniel Burgess တို့သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည့် site (realyourbrainonporn.com) ကိုစတင်ခဲ့သည်။။ အများပြည်သူကိုရှုပ်ထွေးစေရန်တွက်ချက်သူအများစုသည်နည်းဗျူဟာများစွာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆိုဒ်အသစ်သည်စာမျက်နှာတစ်ခုစီ၏ဗဟိုနှင့်“ visitors ည့်သည်များလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။"Porn တွင်အစစ်အမှန်သင့်ဦးနှောက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် tab က“ မင်းရဲ့ Brain On Brain” လို့မဟုတ်မမှန်ကြေငြာနေစဉ်
တရား ၀ င်မဟုတ်သောဆိုက်ကိုကြော်ငြာရန်၊ Prause သည်a။ ကိုလည်းဖန်တီးခဲ့သည် တွစ်တာအကောင့်, ယူကျု့ချန်နယ်, Facebook ကစာမျက်နှာ, အားလုံးက“ သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ porn” ဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုကြသည်။ URL ၏တွစ်တာများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်“ Your Brain On Porn” နှင့်“ YBOP” ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းကိုမှားယွင်းစွာရှာဖွေတွေ့ရှိသူများအားရှုပ်ထွေးစေသည်။ အများပြည်သူရှုပ်ထွေးဖို့နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှုမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ချိုးဖောက်သောဆိုက်ကိုကြေငြာခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်သောအက်ရှလန်၊ အော်ရီဂွန်မှအစပြုသည်ဟုမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၏မန်နေဂျာအဖြစ်ချီးမွမ်း RealYBOP တွစ်တာပုံမှန်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောက်ယှက်မှုတို့တွင်ပါ ၀ င်သည် me, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, Gabe NCOSE၊ Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ တရားဝင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အငြင်းပွားမှုများအတွက်တရား ၀ င်အကြံပေးသူမှာ Wayne B. Giampietro ဖြစ်သည်။ Backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးမှုနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ USA Today ဆောင်းပါး: Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်).
Prause သည်မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home Program” ထဲသို့ဝင်ရောက်သည် YBOP ၏“ Prause pages” ကိုဖြိုချရန်သူမအားကယ်လီဖိုးနီးယားရှေ့နေချုပ်ရုံးကလှည့်စားရန်
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသူမ၏အန္တရာယ်ရှိသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာကိုကျဆင်းသွားသည်။ Prause သည်မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home Program” ထဲသို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်သူမ၏သားကောင်များကိုအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှေ့နေချုပ်အား YBOP ၏ Prause စာမျက်နှာများကိုလိမ်လည်လှည့်ဖြားရန်လှည့်စားခြင်း၊
၂၀၁၉ နို ၀ င်ဘာလ ၁၉ ရက်တွင် Prause သည် YBOP ၏ webhost Linode ကိုခြိမ်းခြောက်ရန်လှည့်ခဲ့သည် အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး & စာကိုရပ်တန့်ထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် လိင် - စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေ ဝိန်း Giampietro ။ ကယ်လီဖိုးနီးယားအလွဲသုံးစားမှု “ အိမ်မှာလုံခြုံတယ် ပရိုဂရမ်” Prause's Cease & Desist စာတွင်သူမ၏လိပ်စာသည် YBOP တွင်ရှိသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် (မဟုတ်ပါ)။ Linode သည် Prause ၏အခြေအမြစ်မရှိသော C&D အက္ခရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားမည်သည့်အခါကမျှအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ အကြောင်းမှာသူတို့၌လုပ်ဆောင်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိသော (Prause တွင် URLs သို့မဟုတ် screenshots များမရှိပါ) အဲဒီအစား၊ C&D ကကျွန်တော့်ဆီကို YouTube ရုပ်သံလိုင်းပိုင်ရှင်ဆီကနေပေးပို့ခဲ့တာပါ။ Prause က YBOP (သူနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်) သူမ၏အိမ်လိပ်စာပါသောမှားယွင်းသောအခိုင်အမာအခြေပြုဥပဒေရေးရာခြိမ်းခြောက်မှုများကိုအောင်မြင်စွာနှုတ်ပိတ်ခဲ့သည်။
Linode အားဖွင့် Prause သည်ဒုတိယအကြိမ် C&D ကိုကြိုးစားခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှေ့နေချုပ်အားသူမအားမှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုဖြင့်ကူညီရန်တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုခြင်း (ဇန်နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၀) ။ နောက်ထပ်တစ်ခါ, Linode အတည်ပြုပြီး YBOP သည် (Prause ၏လိပ်စာပါသည့်မည်သည့်စာမျက်နှာများကိုမဆိုပျက်ကွက်ခဲ့သကဲ့သို့) Prause ၏လိပ်စာကိုထုတ်ဝေခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
Prause နှစ်ဆတိုးလာတဲ့အခါသူမရဲ့မုသားကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ် ဤဆောင်းပါးနှင့်အတူ။ သူမသည် OR ရှိဤနေရာတွင် Ashland ရဲဌာနကိုခေါ်။ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်တရားရုံးရှိယာယီတားမြစ်မိန့်ကိုတင်သွင်းခြင်းဖြင့်သူမတုန့်ပြန်ခဲ့သည်။
California AG မှသူမ၏လိပ်စာကို YBOP တွင်ရှာမတွေ့နိုင်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်၏ဒေသဆိုင်ရာရဲကိုခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခြင်းကိုချီးမွမ်းခဲ့သည် ငါ့ကိုဆန့်ကျင်အရေးယူဖို့ (Ashland, Oregon) (၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၊ ၂၀၁၂) ။ အရာရှိက Prause ၏စွပ်စွဲချက်များသည်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း (မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုသူမ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်မဟုတ်ပါ) နှင့်၎င်းသည်အရပ်ဘက်သဘောထားကွဲလွဲမှုဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် သူကအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် Prause ကသူမသည်ကျွန်ုပ်အားတားမြစ်ရန်အမိန့်ရှာနေသည်ဟုလူသိရှင်ကြားကြေငြာခဲ့သည် ဟောင်း Part (ငါ့ကိုအကြောင်းကြားရန်မလိုဘဲ, ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမဝန်ဆောင်မှု):
သူမကသူမရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုအဝေးကနေအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ် link ကိုမပေးနိုင်လို့သူမလိမ်သည့်အချိန်ကိုသင်အမြဲပြောနိုင်သည်။ Prause ၏အစောပိုင်း tweets များကသူမကိုလိမ်သည်ဟုဖော်ထုတ်သည်။ တကယ်တော့, သူမကိုယ်တိုင်သူမကလူသိရှင်ကြားသူမကအင်တာနက်ပေါ်တွင်လိပ်စာအတုများသာတင်ထားသောကြောင့်မည်သူမျှသူမ၏အိမ်လိပ်စာကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှမတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်:
အထက်ပါဟာဒီထက်မကပါ သူမသည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှေ့နေချုပ်အားလိမ်ညာခဲ့သည်ကိုဝမ်းမြောက်စွာဝန်ခံသည် သူမသည်စိတ်မချရသောသူမ၏အန္တရာယ်ရှိသောတားဆီးမိန့်ကိုအားပေးရန်ကြိုးစားနေသည်။
တရားသူကြီးကဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့မှာငြင်းဆိုခဲ့သည် ယာယီတားမြစ်မိန့် (TRO) ၌ကျွန်ုပ်သည်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြသခြင်းမရှိဘဲ ၂၀၂၀ မတ်လ ၆ ရက်တွင်ပုံမှန်တားဆီးမိန့်ကြားနာခြင်းပြုလုပ်သည်။ သူမ၏အတုအယောင်သားကောင်ဖြစ်မှုကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်အနေဖြင့် Prause ကတရားသူကြီးမှကျွန်ုပ်အားဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည် ငါ့လမ်း:
ငါဖျန်ဖြေခြင်းမတက်ရောက်ခဲ့ဘူး ဒါဟာ optional ကိုကြီးနှင့်ငါငြင်းဆိုခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခါတရား ၀ င်စနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့နေတွေကိုငှားခိုင်းတယ်။ လူတိုင်းအံ့အားသင့်ဖို့ကောင်းတာကဒုတိယတရားသူကြီးကတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုလုံးကိုပယ်ဖျက်မယ့်အစား၊ ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၂၅ ရက်အထိကြားနာမှုကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်။ ထို့နောက် COVID-25 ထိမှန်သည်။
ချီးမွမ်းစကားကသူမရဲ့“ သက်သေ” လို့ခေါ်တဲ့သူမရဲ့သားကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအသရေဖျက်မှုတွေပါ ၀ င်သည်
တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ အမြင့်ဆုံးအဖြစ်အပျက်များတွင် Prause ကကျွန်ုပ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသားသားနှင့်“ သေနတ်ဝါသနာပါသူများ” ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
သူမသည်ကျွန်ုပ်၏သား (အရပ်ရှည်ရှည်) ဓာတ်ပုံနှင့်အိုမင်းသောလူငယ်တစ် ဦး အားသေနတ်များဖြင့်ပါ ၀ င်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကို“ သက်သေပြရန်” ဆိုခဲ့သည်။ Prause ကတိုတောင်းတဲ့ ၂၀- လူငယ်တစ်ယောက်ဟာငါပဲလို့ပြောခဲ့တယ်။ ချီးမွမ်းမှုကိုတရားရုံးကိုတမင်တကာလှည့်စားခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါသည်သူမ၏သား Prause ၏မုသားစကားဖြည့်ထားသောတားမြစ်မိန့်ကိုဖြည့်စွက်ထားသည့်ဓာတ်ပုံသုံးခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ချီးမွမ်းစကားကကျွန်ုပ်၏သားကိုစစ်ဆေးသည် ကိုယ်ပိုင် သူမမှားယွင်းနိုင်သည့်မည်သည့်ရုပ်ပုံကိုမဆိုရှာရန် Facebook ။
အမှန်တရား - ငါရောငါ့သားရောသေနတ်တွေမပိုင်ဘူး။ အထက်ပါပုံသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်ကဖြစ်ပြီး၊ Sacramento ရဲအရာရှိ၏လက်ထောက် (အရာရှိ ၂ ဦး သည် meme generator အဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်) အရာရှိအရာရှိတစ် ဦး အားသေနတ်ကိုင်ကာ Locker တွင်ရိုက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဟာသတစ်ခုပဲ။ သူ၏ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ (အောက်တွင်) တွင်ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သားသည် Gang Suppression Unit ကိုသူတို့၏တာ ၀ န်များနှင့်ကူညီရန်အိုင်တီနည်းပညာအသစ်များတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ကာလီဖိုးနီးယားတရားရေးဌာနနှင့်လပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏သားသည်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအခြားသူသည်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်သင်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏သားကို cyberstalking မှတစ်ဆင့်ရရှိသောဤမှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်သည်သူမ၏“ သက်သေအထောက်အထားများ” ကိုလုပ်ကြံခြင်း၏ပြီးပြည့်စုံသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Prause သည်သူမ၏အခြားပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ - ကျွန်ုပ်၏ YBOP တွင်ကျွန်ုပ်၏လိပ်စာကိုတင်ခဲ့သည်
Prause ၏အခြားအဓိကအခိုင်အမာမှာသူမကသူမ၏အိမ်လိပ်စာကို YBOP တွင်တင်ထားသည်။ မဟုတ်ပါ။ သူမ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်တစ်ခါမျှမရှိခဲ့ပါ။ ဤအခိုင်အမာကိုထောက်ခံရန် Prause ၏ TRO တွင်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ် URL တစ်ခုရှိသလား။ တစ် ဦး ထံမှအီးမေးလ်တစ်ခုသာ Liberos ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် (Prause ၏ကုမ္ပဏီ) နှင့် Prause's မှပူးပေါင်းသူ အငြင်းပွားဖွယ် Orgasmic ဘာဝနာလေ့လာမှုများGreg Siegle
Siegle (သို့) Prause ကသူတို့ရဲ့အခိုင်အမာထောက်ခံမှုအတွက် screenshot ဒါမှမဟုတ် URL ကိုဘာလို့မပေးနိုင်တာလဲ။ နှစ် ဦး စလုံးလိမ်နေသောကြောင့်။ ဒါဟာ Prause သူမ၏မုသာစကားကိုသူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ hypnotizes ဘယ်လိုငါ့ကိုအံ့အားသင့်ရန်ဘယ်တော့မှမ။
Siegle နှင့် Prause နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တွင်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှအီးမေးလ်ကိုကျွန်ုပ်သည် Prause မှလုပ်ဆောင်နိုင်သောတောင်းဆိုမှုများ (ဥပမာလိပ်စာပါသည့်စာမျက်နှာများ၏ URL များ) ကိုပျက်ကွက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Prause သည်သူမ၏ TRO တွင်လိမ်ခဲ့သည် - သူမ၏အိမ်လိပ်စာသည် YBOP တွင်လုံးဝမရှိခဲ့ပါ။
သူမကသူမမှာသူမရဲ့အိမ်လိပ်စာကိုတက်ကြွစွာဖော်ပြသည့်ဒုတိယတွစ်တာအကောင့်တစ်ခုရှိပြီးသူမရဲ့အိမ်လိပ်စာနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထုံးစံအတိုင်းသူမကသူမ၏စွပ်စွဲချက်များကိုထောက်ပံ့ရန်ဖန်သားပြင်သို့မဟုတ် URL မရှိပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့မှားယွင်းတဲ့စွပ်စွဲချက်နှစ်ခုလုံးကမှားနေလို့ပါ tweets (သူမ၏ပြုံးနေမျက်နှာနှင့်အတူအချို့သော) ဖြစ်ကြသည် YBOP ပေါ်မှာပါငါသူမ၏မှတ်တမ်းတင်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်အဖြစ် ဖြစ်ပွားနေသောအန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှု။ ပြည်သူလူထုကသူမကိုညွှန်ပြသည့်သက်သေကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည် အလားအလာဘက်လိုက်မှု နှင့် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု။ သူမ၏တွစ်တာများသည်အများပြည်သူဖြစ်သည်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Prause ၏ကန ဦး တားမြစ်မိန့်ကိုဆန့်ကျင်သောစာရွက်စာတမ်းများ PDF ကိုထောက်ပံ့ပေးသည် -
Nicole Prause ၏အခြေအမြစ်မရှိသော TRO အပေါ်စာမျက်နှာ ၈၉ မျက်နှာပါဂယ်ရီ Wilson ၏တုံ့ပြန်မှု
Prause သည်သူမ၏လိပ်စာအား YBOP တွင်ရှိကြောင်းလိမ်ကြောင်းအတည်ပြု Linode အီးမေးလ်
ဂယ်ရီ Wilson ၏သား၏ကြေငြာချက် (ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်)
သူမ၏မူလ TRO ၏လိမ်လည်မှုများနှင့်အတူ Prause ၏ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ကြေငြာချက်က၎င်း၏ဥများအားလုံးကို“ ဂျာမနီခြင်းတောင်းထဲ” ထည့်သည်"
သူမ၏မူရင်း TRO တွင်“ သက်သေအထောက်အထားများ” သည်အယောင်ဆောင်။ ဖော်ထုတ်ခံရခြင်းကြောင့် Prause ၏ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀ ကြေငြာချက် (သြဂုတ်လ ၆ ရက်ကြားနာခြင်းအတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားခြင်း) သည်ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ရန်တက်ရောက်ရန်ဂျာမနီသို့ကျွန်ုပ်၏ ၂၀၁၈ ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သတ်သောပုံပြင်အသစ်ကိုဖွင့်ထားသည်။ အပြုအမူစွဲအပေါ် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံ (ICBA) ။ Trause ကသူမရဲ့ TRO ကြေငြာချက်မှာသူမဟာ ICBA အတွက်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဖြစ်တယ်လို့မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ငါ "သူမ၏ရင်ဆိုင်ဖို့။ " ဒဏ်ာရီနှင့်ငါ့ PAPuse ၏ဆန့်ကျင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန့်ကျင်မှုများစွာသည်ယခုဤတစ်ခုတည်းသောအခိုင်အမာအပေါ်တွင်မူတည်နေသည်။
ဂျာမနီသို့သွားသောခရီးကိုရည်ညွှန်းသည့်သူမ၏ဇူလိုင်လကြေငြာချက်မှကောက်နုတ်ချက် ၅ ခုထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူမ၏ဂျာမနီပြောဆိုချက်ကိုအောက်ပါဝါကျသည်အလွန်ဖော်ပြသည်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကူညီခွင့်ပြုပါ။ သတိပြုရန်မှာကျွန်ုပ်၏ဂျာမနီခရီးစဉ်သည်“အ အခွေခံ ကယ်ဆယ်ရေးများအတွက် Prause ရဲ့လက်ရှိတောင်းဆိုမှုကို၏။အကယ်၍ Prause ၏ဂျာမနီ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်ဖြုတ်ချလိုက်လျှင်သူမအမှုတစ်ခုလုံးသည် Humpty-Dumpty ကဲ့သို့ပြိုကွဲသွားသည်။ ထပ်မံ၍ ဤဂရုတစိုက်ဖော်ပြထားသည့်အကြံပြုချက်သည် Prause ၏ရှေ့နေက ၀ င်ဝံ့သော“ သက်သေသာဓက”
ထို့နောက် Prause သည်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးသူမသည်အိမ်တွင်လေ့လာခြင်းသို့မဟုတ်အမည်မသိလူတစ်ယောက်၏အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်နေသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေ၊ Prause ၏လက်ရှိကယ်ဆယ်ရေးအတွက်တောင်းဆိုမှု၏အခြေခံမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပ်တိုက်တွေ့မှု၏ခြိမ်းခြောက်မှုသို့ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါဒီ bunkum ခဲ့သိတယ်ဒါကြောင့်ငါမေးတယ် ICBA စီစဉ်သူ ကြောင်းအတည်ပြုရန် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခြင်းကိုတင်ပြရန်တစ်ခါမျှမတောင်းဆိုခဲ့သလို၊။ သူတို့၏စာက Prause သည်မိမိကိုယ်ကိုလိမ်လည်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် Prause သည် ICBA ညီလာခံတွင်တက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်ဖိတ်ကြားခြင်းကိုဘယ်တော့မျှမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမယုံကြည်ပါ။ သူမ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးတွင် Prause ၌ရှိသည် စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ် အမူအကျင့်စွဲများ၏ concept ကိုဆန့်ကျင်, အထူးသဖြင့်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ.
Prause သည်သူမအပေါ်တရား ၀ င်ရလဒ်ကိုရရှိစေခဲ့သည်။ (သူမ၏ရှေ့နေကပင်သူမကျင့်ဝတ်ကိုကျင့်ရန်ဖိအားပေးသောကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်)
မည်သူမဆိုဖြည့်စွက်ငွေကိုတောင်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲတားမြစ်မိန့်ကို file နိုင်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်သူမနှင့်သူမ၏သူငယ်ချင်းများလိုက်စားနေသည့် smear ကင်ပိန်းကိုယုံကြည်မှုရှိစေရန်ကြိုးပမ်းရာတွင်အလွန်အကုန်အကျသက်သာသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးလို့သူမျှော်လင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဟာငါ့ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုနှိမ်နင်းဖို့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ သူမသည် TRO ၏တောင်းဆိုမှုတွင်ကျွန်ုပ်သည် (“ ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိ”) ကျွန်ုပ်သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူဖြစ်ကြောင်းတရားသူကြီးအားအစပိုင်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်ကောင်းတွေရှိပေမဲ့သူမအပေါ်ထားတဲ့အသရေဖျက်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုတာမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးလို့သူမကငါဟာဆင်းရဲနွမ်းပါးသူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါ့အချိန်မဖြုန်းချင်ဘူး
ငါသူမ၏ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအမိန့်ကြိုးပမ်းမှုခဲ့သည်ယုံကြည်ပါတယ် လည်း Prause ကိုအခြားသူများကတရားစွဲဆိုထားသည့်အသရေဖျက်မှုနှစ်ခုတွင်သက်သေအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုဂုဏ်တင်ရန်ကြိုးစားခြင်း။ ၎င်းသည်ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီးယခုအစားသူမကိုထပ်မံရှုတ်ချခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်နေတာလဲ ...
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကန ဦး တရားသူကြီးက Prause အား ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ကျွန်ုပ်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲယာယီချုပ်နှောင်ထားသည့်အမိန့်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၌အားနည်းသောကိစ္စရှိကြောင်းသူမအားကြီးသောအချက်ပြခဲ့သည်။ TRO အားငြင်းပယ်ခြင်းက Prause သည်တားမြစ်မိန့်ကိုကျွန်ုပ်အားအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းသည်ကန ဦး ကြားနာခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် (၎င်းသည် Prause သည်ကျွန်ုပ်အားစနစ်တကျမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးသောကြောင့်ဒုတိယကြားနာမှုသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်) ။
လာမယ့်3လအတွက်, Prause သူ့ကိုယ်သူမှဂယက်ရိုက်စရာမလိုဘဲတားမြစ်မိန့်ကိုကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း, ငါအများကြီးပြန်လည်ကုစရာမလိုဘဲငါ့ရှေ့နေအခကြေးငွေနှင့်အတူမှီဝဲလိမ့်မယ်။ ဇူလိုင်လတွင်ပြုလုပ်မည့်ကြားနာမှုတွင် Prause ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုဖိနှိပ်ရန်အတွက်သူမအားခြိမ်းခြောက်သည်ဟုမတရားစွပ်စွဲခံရသည်ကိုတစိတ်တပိုင်းအနေဖြင့်ဇွန်လတွင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည် တားမြစ်မိန့်ကိုပယ်ဖျက်ရန် SLAPP လှုပ်ရှားမှု။ ထိုအချိန်တွင်သူမသာရှေ့ဆက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်တရားစွဲဆိုထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ -
Gary Wilson ၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ခြင်း - သပိတ်မှောက်မှုတားမြစ်မိန့်ကိုကြားနာခြင်းသတိပေးချက် (မေလ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၂၀)
Gary Wilson အတွက် Staci အညွှန့်ကြေငြာချက်
ဂယ်ရီ Wilson အတွက်အဲလက်စ် Rhodes ကြေငြာချက်
ငါတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း Prause ကြောင့်ငါ၏အအဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သည် လူတို့အပေါ်အခြေမခံသောအသေးစားတောင်းဆိုမှုများအတွက်တရားရုံး၏ 'အသရေဖျက်မှု' တရားစွဲမှုများကိုစတင်စတင်ခဲ့သည်, CA. အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခံရဖို့တရားခံလိုအပ်သည် အကယ်၍ ငါ CA သို့လာလျှင်တားမြစ်မိန့်ကြားနာမှုအတွက်သက်သေခံရန်သူမသည်သူမအတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်တရားစွဲဆိုမှုငယ်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်ကိုအစေခံမည်ဟုယုံကြည်သည်။
ထွက်လာသည်နှင့်အမျှတရားသူကြီးကကိစ္စနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီး Povuse နှင့်ကျွန်ုပ်သည် Covid 19 ကြောင့်အဝေးမှပါ ၀ င်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကျေးဇူးတင်စရာ၊ သူမအနားကဘယ်နေရာကိုသွားမသွားဖို့ငါ့ကိုနှမြောခဲ့တယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်၎င်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်ခြင်းမှဝေး, ငါသူမရှိနေခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းယင်း၏ထင်ရှား ကျွန်ုပ်၏သြဂုတ်လ ၅ ရက်တွင် Prause ၏ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်ကြေငြာချက်ကိုတရားရုံးတင်ခဲ့သည်
ဂယ်ရီ Wilson ၏ကြေငြာချက် (၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၅)
ဂယ်ရီ Wilson ၏အချက်အား Nicole Prause အားအမှတ်ပေးပြီး (၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၅ ရက်)
ဂယ်ရီ Wilson ၏ထင်ရှားသောကန့်ကွက်ချက်များ - အားလုံးနီးပါးသည် (၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၅ ရက်) တွင်ရေရှည်တည်တံ့ခဲ့သည်။
Nicole Prause ၏အကြံပေးအဖြစ်သက်သာခွင့်ရရန်ကြေငြာချက် (သူမ၏ရှေ့နေက Prause ကသူအားမကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအပြုအမူတွင်ပါဝင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်)
သြဂုတ်လ ၆ ရက်ကြားနာခြင်းမတိုင်မီလေးတွင်သူမ၏ရှေ့နေကသူမကိုကိုယ်စားပြုခြင်းမှမအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သည်နှင့်အညီ, သူ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာ သူ၏ကြေငြာချက်သူမသည်သူမအားမကောင်းသောအပြုအမူဖြင့်အတင်းအကျပ်ပြုမူရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမအနေဖြင့်သူမခွင့်ပြုချက်မရှိသော“ သက်သေအထောက်အထားများ” (သူမ၏သူငယ်ချင်းများထံမှအက္ခရာများနှင့်ထောက်ခံမှုမရှိသောစွပ်စွဲချက်များ) ကိုတင်ပြရန်သူကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူ၏တင်သွင်းထားသောစာရွက်စာတမ်းမှကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်၎င်းကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုသံသယရှိသည်။
သူမ၏ရှေ့နေကသူမသည်သူမအားလေလံဆွဲရန်မလိုသောကြောင့်သူသည်သူ့ကိုဝတ်စုံဖြင့်ခြိမ်းခြောက်မည်ဟုထင်သောကြောင့်ရုပ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သူက Prause နှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်ပြတ်ပြတ်သားသားပျက်ပြားသွားသည်ဟုဆိုသည် သူသည်ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအားသူမ၏တုံ့ပြန်ချက်ကိုတင်သွင်းပြီးသည့်နောက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (အမှုကြားနာခြင်းမှအပအခြားဥပဒေရေးရာအလုပ်များမရှိသေးပါ) ။
တရားသူကြီးသည်ကြားနာခြင်းအားနှောင့်နှေးခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Prause ကိုကုမ္ပဏီကိုယ်စားအကြံပေးရှေ့နေကကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ သူသည်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့သည် - သူသည်သက်သေပြကန့်ကွက်မှုအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည့်အချိန်တွင်အလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ။ (အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်း မကြာသေးမီကသူမ၏အဘို့အ Prause chidedဖင့်နှေးသည် အပြုအမူနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုများ ").
ကြားနာခြင်းမပြုမီ, Prause Twitter ပေါ်တွင်သွား၏ ကြေညာရန် သူမကျွန်တော့်ကို“ အကာအကွယ်အမိန့်” ပေးခဲ့ပြီး၊
စကားမစပ်ကျွန်ုပ် SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုပေးရန်တရားသူကြီးသည် (၁) သူမ၏တားမြစ်မိန့်သည်သူ့ရဲ့အရည်အချင်းနှင့်မကိုက်ညီကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်အပေါ်ထွက်ပြောပါ။
အဓိကအချက်မှာ Prause သည် SLAPP ၏လှုပ်ရှားမှုဆုံးရှုံးမှုကိုသူမကိုယ်တိုင်တင်ခြင်းအားဖြင့်သူမအပေါ်အခြေမခံသောတားမြစ်မိန့်ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်သူမအပေါ်သို့ရောက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ရှေ့နေကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်သူမအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းကိုကြိုတင်ကြေငြာခြင်းဖြင့်၎င်းကိုအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ တစ်ဖန်သူမသည်ကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ပါ။
တရား ၀ င်စနစ်သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟုတ်ပါ။ သူမနှင့်သူမခရိုနီများသည်အများပြည်သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက်တရားရုံးတွင်လူစုခွဲသည်ဟူသောမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များသည်မှန်ကန်သောတရားရုံးများ၌ပျံသန်းခြင်းမရှိပါ။ ဒါကြောင့်ပဲ SCRAM ရှုံးသည် သူမ၏မုသားများကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးသူမ၏အသရေဖျက်မှုနှစ်မျိုးစလုံးတွင်သူမ၏အခွင့်အလမ်းကိုကောင်းစွာနိမိတ်မပြခဲ့ပါ။
နောက်ဆုံးသတင်းများ - အသရေဖျက်မှုအတွက် Prause ကိုအခြားသူကတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Melissa Farmer vs Aaron Minc
နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူရန် (ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၂၀)
Prause သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်အသရေဖျက်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချသည့်ဒုတိယတရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ 2020 ဇန်နဝါရီလ 22 ရက်နေ့တွင်ကြားနာမှာ အော်ရီဂွန်တရားရုံးကကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်မံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ပျက်ကွက်အားထုတ်မှုတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် တစ်ဒါဇင်တရားစွဲမှု လူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပြီးခဲ့သည့်လများအတွင်းတင်သွင်းခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမတော်မတရားသတင်းပို့ခံရပြီးနောက်သူမအားထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများအားနှုတ်ပိတ်ရန်အမှန်တကယ်တရားစွဲဆိုမှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနီးကပ်ဆက်ဆံမှု နှင့်သူမ၏မလိုတမာသောအပြုအမူသို့မဟုတ်သူမအပေါ်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့်အသရေဖျက်မှု ၃ ခုတွင်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသူ